महिनैपिच्छे बढे वैदेशिक रोजगारीमा जाने : सबैभन्दा बढी साउदीमा « Dhankuta Khabar
मुख्य स्थानीय पूर्वेली राष्ट्रिय राजनीति समाज विश्व पत्रपत्रिका
प्रमोसन भिडियो म्युजिक भिडियो विविध भिडियो
राशिफल विचार/ब्लग प्रवास रोचक / बिचित्र अपराध कृषि फोटो ग्यालरी धर्म/दर्शन साहित्य
News World Multimedia Amazing
आजको राशिफल#कोरोना#धनकुटा#पाख्रीबास#पाख्रीवास#प्रचण्ड#प्रधानमन्त्री#मुख्यमन्त्री#राशिफल#साप्ताहिक राशिफल
महिनैपिच्छे बढे वैदेशिक रोजगारीमा जाने : सबैभन्दा बढी साउदीमा
प्रकाशित मिति : 22 December, 2019
काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या महिनैपिच्छे बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि कात्तिकमा ५१ हजार दुईसय ७४ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए । मंसिरमा यो सँख्या साढे ५ हजारले बढेको छ ।
मंसिरमा ५३ हजार दुईसय १५ पुरुष र तीनहजार पाँचसय ९५ महिला गरी ५६ हजार ८ सय १० जनाले वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यीमध्ये २६ हजार सातसय ९५ जनाले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
यो वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि खुल्ला गरिएका विभिन्न ८५ वटा देशमा जानेहरुको तथ्याँक हो । असोज महिनामा १८ हजार ७ सय ७१ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
सबैभन्दा बढी साउदीमा : मंसिरमा साउदी अरब जानेको संख्या बढी देखिएको छ । मंसिरमा १४ हजार २ सय ८४ पुरुष र ७३ महिला गरी १४ हजार ३ सय ५७ जनाले साउदीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यस्तै दोस्रोमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने देश यूएई छ । ११ हजार सातसय ९४ पुरुष र १ हजार ४ सय ५० महिलासहित १३ हजार दुईसय ४४ जनाले यूएईको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
१२ हजार ४ सय ३९ पुरुष र ४ सय ७३ महिलासहित १२ हजार ९ सय १२ जनाले कतारको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मलेसियाको लागि ८ हजार ७ सय ७३ र कुवेतको लागि २ हजार ६ सय ७६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यस्तै १ हजार ७९ जनाले बहराइन र ६ सय ३७ जनाले ओमनको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो महिनामा ४ सय ८३ पुरुष र ३४ महिलासहित ५ सय १७ जनाले जापानको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
१ सय ७ म्यानपावरले एक जना कामदार पनि पठाउन सकेनन्
मंसिरमा १ सय ७ म्यानपावरले एक जना कामदार पनि पठाउन सकेनन् । ८ सय ३५ म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरेकोमा मंसिर महिनामा ७ सय २८ ले मात्र कामदार पठाउन सकेका छन् ।
सबैभन्दा बढी ब्लू ओसयन सर्भिसेजले ४ सय ८५ लाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको छ । यस्तै दोस्रोमा एसओएस सर्भिसेज प्रालीले ४ सय ३५ कामदार पठाएको छ । ३६ वटा म्यानपावरले १ जना र ३४ वटा म्यानपावरले २ जना कामदारलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् ।
अदक्ष नै बढी : वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा अझै पनि केही सीप नसिकेर जानेहरुको संख्या बढी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँकअनुसार मंसिरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सात जना उच्च दक्ष (हाइ स्किल्ड), ७५ जना व्यवसायिक रुपमा जानेहरु छन् ।
यस्तै अर्धदक्षको सँख्या ५ हजार ७ सय ४५ र दक्ष कामदारको १९ हजार ७ सय ९६ छ । मंसिरमा ३१ हजार १ सय १८ अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका बोर्डले जनाएको छ । उज्यालोबाट
अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा राखियो बाटोको नाम ‘गोर्खा वे’
मेलवर्न । अस्ट्रेलियाको विक्टोरिया राज्यको राजधानी मेलबर्न शहरको Wyndham Vale काउन्सिलमा बन्दै गरेको
कोरियामा रहेका धनकुटेलीद्वारा ५ लाख बराबरको कोरोनाविरुद्धको सामान सहयोग
कबिराज घिमिरे । धनकुटा कोरिया समाजले धनकुटामा करिब ५ लाख बराबरको कोरोनाविरुद्धको सामान
२३६ नेपाली यात्रु बोकेर कोरियन एअर विमान शनिबार नेपाल आउँदै
जीवन खत्री/सउल, असार ५ । प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएर फर्कन नसकेका नेपालीमध्ये २३६ जना शनिबार
बेलायतबाट नेपाल फर्किन चाहने ३९१ जनाको विवरण नेपाल पठाइयो
लण्डन, जेठ २७ गते । बेलायतबाट नेपाल फर्कन जरुरी रहेका ३९१ जनाको विवरण
बढ्दो विपद्जन्य कहर : अपत्यारिलो ठाउँमा अकल्पनीय क्षति
कोरोनाको संक्रमणको आशंका : कतारबाट फर्किएका १४९ जनालाई खरिपाटी लगियो
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार २७ गते…
अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजतका लागि यती एयरलाइन्सको निवेदन
केहि दिन देखि धनकुटामा समेत माक्स लगाउनेको संख्या बढे
धनकुटाका युवाले बनाए बाँदर धपाऊने यस्तो यन्त्र (हेर्नुहोस्
धनकुटाको यो ठाऊँ जहाँ सित्तैमा टन्न आँप खान
गाउँपालिकाले किसानलाई बाँड्यो ९० थान बन्दुक
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा अनौठो र आकर्षक पार्क निर्माण
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् असार
धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि.
सूचना विभाग दर्ता नं. : ५४६/०७४-७५
प्रबन्ध निर्देशक / सम्पादक : विष्णु विक्रम निरौला
सह-सम्पादक : मोहन राई पर्देशी
संवाददाता : शर्मिला राई, विकास घिमिरे
ग्राफिक्स डिजाइनर : विदुर कुँवर
साहित्य/ लेख : ओम प्रकाश निरौला
राशिफल : ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
कानुनी सल्लाहकार : बम बहादुर खत्री
© 2020 Dhankuta Khabar All Rights reserved by Dhankuta khabar.com